အမျိုးသမီးရေးရာအခွင့်အရေးနှင့် ဗိသုကာပညာ - ဝီကီပီးဒီးယား
အီလီအန် ဂရေးကဲ့သို့ အမျိုးသမီးဗိသုကာများက အမျိုးသမီးရေးရာသီအိုရီအဖြစ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဗိသုကာပညာများကို လမ်းဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဤအမျိုးသမီးများသည် ရိုးရာမိသားစုများ နေထိုင်သည့်နည်းလမ်းများကို စိမ်ခေါ်နေသော ဗိသုကာကို စိတ်ကူးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးသီအိုရီနှင့် ဗိသုကာပညာ ချဉ်းကပ်စဉ်းစားသောအရာကို အမျိုးသမီးဗိသုကာများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည် မဟုတ်ပါ။ ဗိသုကာ ပညာရှင် လီ ကောဘူဆီယား နှင့် အဒေါ့ဖ်လာတို့ကလည်း သူတို့၏ ဗိသုကာလက်ရာများမှာ အမျိုးသမီးရေးရာ သီအိုရီကို ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်လိုရေစ် ဟေဒင်းန်၏စာအုပ် "ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေး"မှာ သူမက 'ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဣထိယရိုးရာအစဉ်အလာ'က အိမ်အလုပ်နှင့် အမျိုးသမီးများနှင့်မိသားစုများ၏ အိမ်ယာလိုအပ်ချက်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန် လမ်းကြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဗိသုကာနှင့် မြို့ပြပုံစံရေးဆွဲသူများက မိသားစုဘဝအပေါ် ဒီဇိုင်းသက်ရောက်မှုကို ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန် တိုက်တွန်းသည်။ မိသားစုများ၏ ပြောင်းလဲနေသော လိုအပ်ချက်များကို စဉ်းစားပေးသည့် ဤစိတ်ကူးအိုင်ဒီယာကို Truus Schröder, အီလီရန် ဂရေးနှင့် လီကောဘူးဆေး များ၏ စတိန်း ဒီ မွန်းဇီအိမ်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အဆိုပါ Rietveld Schröder အိမ်က မိသားစု၏ "ခေတ်သစ်" ဘဝများ၏ အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှုနည်းလမ်းကို ပြသသော ဗိသုကာ လက်ရာဖြစ်သည်။
"ဒီSchröderရဲ့အိမ်သည် အနုပညာဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးသာမက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့် တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့တာဝန်များကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့် ပဝတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုသူများကို ခံစားစေပါသည်။"
အဆိုပါ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော နံရံများ၊ အကာအရံများသည် ဗိသုကာပညာက ကြီးမြတ်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟူသော ခြုံငုံခံစားမှုအပြင် အသိတရားလင်းလက်မှုကို ပေးသည်။ အိမ်သည် မိသားစု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်သည်ဆိုသော အချက်ကို Truus Schröder က ယုံကြည်ခဲ့သည်။ Truus Schröder သည် နှစ်ဆယ်ရာစုဒတ်ခ်ျနှင့် ဥရောပအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရာနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပြီး သူမ၏အိမ်သည် ဤရည်ရွယ်ချက်များကို အခြေခံခဲ့သည်။
အီလီရန် ဂရေး ၏ လက်ရာ E-1027 သည် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို အခြေခံသည့်ဗိသုကာလက်ရာ နောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Schröder ကဲ့သို့ ဂရေးသည် နေထိုင်သူများနှင့် မိသားစုအသစ်ယူနစ်က လိုအပ်သည့် ဗိသုကာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဂရေးသည် ခေတ်သစ်ဗိသုကာမျာကို အလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်အတွင်း အထူးသဖြင့် LeCorbusier ၏ "ခေတ်သစ် ဗိသုကာ၏5မှတ်" သည် အဆောက်အဦး သို့မဟုတ် အိမ်၏ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည့် ဥပမာဖြစ်သည်။
E1027 နှင့်The Schroder အိမ်ကဲ့သို့ပင် ဗီလာ စတိန်း ဒီ မွန်ဇီ က အမျိုးသမီးသီအိုရီမှတဆင့် ဗိသုကာလက်ရာကို ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ပိုလူသိများသောနည်းအရ ဤအိမ်ကို ကျားမဆက်ဆံရေးနှင့် ယောက်ျားနှင့် မိန်းမအကြား ဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းအသစ်အဖြစ် ညှိနှိုင်းခဲ့သည့် လမ်းသစ်ဟု ခေါ်တွင်သည်။
ထိုအိမ်သည် အမျိုးသမီးသီအိုရီအတွက် အထူးသဖြင့် အရေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပုံမှန်ပြအိမ်အုပ်စုတစ်စုနှင့် ကျား၊ မဆက်ဆံရေးများကို မေးခွန်းထုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအိမ်အုပ်စုသည် အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲနှင့် သူမ၏ကလေးနှင့်အတူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အိမ်နေရာအကြောင်း မေးခွန်းထုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
↑ Dolores Hayden, The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities, MIT Press, 1981. p. 3
↑ Friedman, Alice T., "Family Matters: The Schroder House, by Gerrit Rietveld and Truus Schröder," Yale University Press, 2006. p. 81.
↑ Constant, Caroline. "E1027: The Nonheroic Modernism of Eileen Gray," Journal of the Society of Architectural Historians, vol.53, September 1994. p. 265
↑ Friedman, Alice T., Women and the Making of the Modern House: A Social and Architectural History. Yale University Press, 2006, p. 96.
Coleman, Debra (1996). Architecture and Feminism: Yale Publications on Architecture, 1st, New York, NY: Princeton Architectural Press. ISBN 978-1-56898-043-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမျိုးသမီးရေးရာအခွင့်အရေးနှင့်_ဗိသုကာပညာ&oldid=394434" မှ ရယူရန်
အမျိုးသမီးရေးရာ အခွင့်အရေးနှင့် အနုပညာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မတ် ၂၀၁၈၊ ၀၅:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။